Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västmanlands län
Degmooyinka ku yaala Västmanlands län
Dooro degmada ah Västmanlands län ee aad doonaysid inaad wax dheeraad ah ka akhrisato xagga hoose
Dooro degmo Dooro degmo Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås
Degmooyinka iyo gobolka ayaa ah shaqo-bixiyayaaasha ugu weyn gobolkan. Tirada dadka ah da' shaqayn kartaa ee gobolkan hoos ayay u dhacday, gaar ahaan dhanka kuwa ku dhashay Iswiidhan. Taas micnaheedu waa in dadka ku dhashay dalka dibediisa ay muhiim u yihiin in la sugo gobolkan inuu helo xoog shaqo.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Västmanlands län
Mac'hadka sare ee Mälardalens högskola waa mid ka mid ah macaa'hida ugu weyn, leh meel la dago Västerås iyo Eskilstuna. Mac'hadka wuxuu heystaa 13 000 arday, 900 shaqaale iyo bandhig balaaran oo waxbarasho xooga saareysa afar qeybood oo waxbarasho ah: waxbarashada dhaqaalaha, caafimaadka iyo barwaaqo sooranka, macalinimada iyo farsamada. Waxaa kaloo jira xitaa waxbarasho mac'had sare ah ee Skogsmästarskolan ee Skinnskatteberg iyo iskuulka fardo korista. Xaalada dhexe ee gobolka iyo masaafada gaaban waxey sameyneysaa xitaa in ay fududaato in wax laga barto mac'aahida sare oo kale oo ku yaala gobolada dhow.
Akhri dheeraad ku saabsan Jaamicada Mälardalens högskola. Akhri dheeraad ku saabsan waxbarashooyinka jaamicadeed ee Skogsmästarskolan.
Gobolka Västmanland waxaa laga helaa 4 isbitaal. Gobolka ayaa mulkiile ka ah isbitaalada Västerås, Köping iyo Sala. Isbitaalka ku yaala Fagersta baraayfad ahaan ayaa loo maamulaa. Isbitaalka waxaa uu sii dheer qaabilaadyo dhakhtareed ee reed oo kuwo madaxbaan iyo kuwo guud ah (ruggo caafimaad). Gudaha gobolka Västmanland adiga ayaa keligaa dooran kara rugta caafimaadka ee aad la xiriirayso.
Akhri dheeraad ku saabsan isbitaalka ku yaala Fagersta. Akhri dheeraad ku saabsan daryeelka bukaanka gobolka Västmanland kuna qoran bogga 1177 ee Hagida Daryeelka.
Waxaa socota wada shaqayn firfircoon una dhaxaysa hey'addaha dawladeed ee kala duwan, degmooyinka gobolka, shirkadaha iyo ururada in fursado fiican loo abuuro dhamaan muwaadiniinta gobolkan, dadka baraayfadka ah iyo shirkadaha labadaba, iyo dadka dalka ku cusub. Waxaa xitaa la qoray bayaan ujeedo una dhaxeeya Maamulka gobolka, gobolka iyo degmooyinka gobolka si loo abuuro oo loo haysto qaabab wada shaqayn oo wakhti dheer waara kuwaas oo natiijadoodu noqotay goobo joogto ah oo lagaga wada hadlo arrimaha isdhexgalka bulshada.